တစ်ခါ ကြုံဖူးရုံ ဖြင့် တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလွန်းတဲ့ ဘီလူးစီးခြင်း အကြောင်း - Myanmar Daily Time
HomeKNOWLEDGEတစ်ခါ ကြုံဖူးရုံ ဖြင့် တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလွန်းတဲ့ ဘီလူးစီးခြင်း အကြောင်း
ဘီ လူး စီး ခြင်း ဆို သည် မှာ ကိုယ် တိုင် မ ကြုံ ဖူး ရင် တောင် လူ တိုင်း ကြား တော့ ကြား ဖူးလိမ့် မယ် ထင် ပါ တယ် ပ ရိ သတ် ကြီး ရေ…. ။ လူ က နိုး နေ ရက် နှင့် ခြေ တွေ လက် တွေ လှုပ် မ ရ ၊ အော် မ ရ ဟစ် မ ရ နဲ့ အ တော် ကြီး ကို စိတ်ဒုက် ခ ရောက် ရ တဲ့ အ ချိန် ကို ဆို လို တာ ပါ… ။
အ င်္ဂ လိပ် လို ( Sleep Paralysis ) လို့ ခေါ် ပြီး မြန် မာ လို ဘီ လူး စီး တယ် လို့ ခေါ် တဲ့အ ခြေ အ နေ တစ် ရပ် ကို တစ် ခါ လောက် ကြုံ ဖူး သွား တာ နှင့် နောက် ထပ် ဘယ် တော့ မှ မတွေ့ ကြုံ ချင် တော့ လောက် အောင် ပင် ဆိုး ရွား တဲ့ ကိ စ္စ တစ် ရပ် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။
စိတ် ပ ညာ အ ရ ” Sleep Paralysis ” ကို နှစ် မျိုး ခွဲ ခြား နိုင် ပါ တယ်.. ။ ” Isolated Sleep Paralysis (ISP) ” နှင့် ” Recurrent Isolated Sleep Paralysis ( RISP ) ” ဆို ပြီး ဖြစ် ပါတယ်… ။ အ လွယ် ပြော ရ ရင် ISP ဆို သည် မှာ လူ တိုင်း ဖြစ် နိုင် ပေ မယ့် RISP ဆို တာက တော့ အိပ် စက် ခြင်း နှင့် သက် ဆိုင် သော မူ မ မှန် သည့် ရော ဂါ တစ် မျိုး မျိုး ရှိ နေ သူ တွေမှာ သာ ပို ဖြစ် တတ် ပါ တယ်.. . ။
ISP က လူ တစ် ယောက် တစ် သက် မှာ တစ် ခါ လောက် ပဲ ကြုံ တတ် တယ် ဆို ပေ မယ့် RISP က တော့ ခ ဏ ခ ဏ ပြန် ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ် ။
မြန် မာ လို ပြော ရ လျင် ဘီ လူး စီးတယ် လို့ ဆို ရ မှာ ဖြစ် ပြီး ၊ သာ မန် လူ မှာ ဆို ရင် တစ် သက် မှာ တစ် ခါ လောက် ပဲ ကြုံ တွေ့ နိုင် ပေ မယ့် အိပ် စက် ခြင်း နှင့် သက် ဆိုင် သော ရော ဂါ ရှိ သူ တွေ မှာ ဆို လျင် ခ ဏ ခ ဏ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်.. ။ တစ် ည တည်း မှာ ပဲ နှစ် ခါ သုံး ခါ ပြန် ဖြစ် နိုင် ချေ ရှိ ပါ တယ်နော်…။
ဘီ လူး စီး တာ ဘာ ဖြစ် လို့ ဖြစ် ရ တာ လဲ ဆို တာ ကို ဖြေ ရှင်း ဖို့ က တော့ အ တော် လက် ဝင် တဲ့ ကိ စ္စ ရပ် တစ် ခု လို့ ဆို ရ မှာ ပါ ပဲ…. ။ ဒါ ပေ မယ့် လည်း ဘာ ကြောင့် လည်း ဆို တဲ့ အ ဖြေ အ တိ အ ကျ တော့ မ ရှိ ဘဲ သီ အို ရီ သ ဘော တ ရား အ ရ ပဲ ရှိ ပါ သေး တယ်…. ။ အ ဓိ က က တော့ လေ ဝင် လေ ထွက် မ ကောင်း တာ မျိုး ၊ ကာ ဘွန် ဒိုင် အောက် ဆိုက် ဒ် အ ရမ်း များ နေ တဲ့ အ ခန်း ထဲ မှာ အိပ် တာ မျိုး ဆို ရင် ပို ဖြစ် ဖို့ လွယ် ကူ ပါ တယ်… ။
ဘီလူးစီးတာ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ အတော်လက်ဝင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ….။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘာကြောင့်လည်းဆိုတဲ့ အဖြေအတိအကျတော့မရှိဘဲ သီအိုရီသဘောတရားအရပဲရှိပါသေးတယ်….။ အဓိကကတော့ လေဝင်လေထွက်မကောင်းတာမျိုး၊ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ် အရမ်းများနေတဲ့အခန်းထဲမှာအိပ်တာမျိုးဆိုရင် ပိုဖြစ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်…။ ဘီလူးစီးခြင်း “Sleep paralysis” က အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင် ဒုက္ခမပေးနိုင်ပေမယ့် ခံစားခဲ့ရတဲ့သူအတွက်တော့ တစ်သက်တာမမေ့နိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလွန်းပါတယ်…။
ဘီလူးစီးတာဟာ အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေ၊ အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့သူတွေ၊ ပက်လက်အိပ်တတ်သူတွေ၊ ဖိအားများလွန်းတဲ့သူတွေ၊ အရမ်းကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့သူတွေ၊ ဆေးသုံးတဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ရှေးခေတ် လူကြီးတွေ ပက်လက်မအိပ်နဲ့လို့ ပြောခဲ့တာက အခုသိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း အင်မတန်မှန်နေတာကို သွားတွေ့ရမှာပါ..။
ပက်လက်အိပ်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကြောင့် လျှာ ဒါမှမဟုတ် အာခေါင်ပျော့တို့ရဲ့ဖိအားကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီး လေသိပ်မဝင်တော့တဲ့အခါ ဘီလူးစီးတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပုံမှန်အိပ်တာ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး…၊ အိပ်ရာ ကုတင်သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ လူလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းအိပ်မယ်ဆိုရင် “Sleep Paralysis” ခေါ် ဘီလူးစီးခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ….။
ဘီ လူး စီး ခွငျး ဆို သညျ မှာ ကိုယျ တိုငျ မ ကွုံ ဖူး ရငျ တောငျ လူ တိုငျး ကွား တော့ ကွား ဖူးလိမျ့ မယျ ထငျ ပါ တယျ ပ ရိ သတျ ကွီး ရေ…. ။ လူ က နိုး နေ ရကျ နှငျ့ ခွေ တှေ လကျ တှေ လှုပျ မ ရ ၊ အျော မ ရ ဟဈ မ ရ နဲ့ အ တျော ကွီး ကို စိတျဒုကျ ခ ရောကျ ရ တဲ့ အ ခြိနျ ကို ဆို လို တာ ပါ… ။
အ င်ျဂ လိပျ လို ( Sleep Paralysis ) လို့ ချေါ ပွီး မွနျ မာ လို ဘီ လူး စီး တယျ လို့ ချေါ တဲ့အ ခွေ အ နေ တဈ ရပျ ကို တဈ ခါ လောကျ ကွုံ ဖူး သှား တာ နှငျ့ နောကျ ထပျ ဘယျ တော့ မှ မတှေ့ ကွုံ ခငျြ တော့ လောကျ အောငျ ပငျ ဆိုး ရှား တဲ့ ကိ စ်စ တဈ ရပျ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ … ။
စိတျ ပ ညာ အ ရ ” Sleep Paralysis ” ကို နှဈ မြိုး ခှဲ ခွား နိုငျ ပါ တယျ.. ။ ” Isolated Sleep Paralysis (ISP) ” နှငျ့ ” Recurrent Isolated Sleep Paralysis ( RISP ) ” ဆို ပွီး ဖွဈ ပါတယျ… ။ အ လှယျ ပွော ရ ရငျ ISP ဆို သညျ မှာ လူ တိုငျး ဖွဈ နိုငျ ပေ မယျ့ RISP ဆို တာက တော့ အိပျ စကျ ခွငျး နှငျ့ သကျ ဆိုငျ သော မူ မ မှနျ သညျ့ ရော ဂါ တဈ မြိုး မြိုး ရှိ နေ သူ တှမှော သာ ပို ဖွဈ တတျ ပါ တယျ.. . ။
ISP က လူ တဈ ယောကျ တဈ သကျ မှာ တဈ ခါ လောကျ ပဲ ကွုံ တတျ တယျ ဆို ပေ မယျ့ RISP က တော့ ခ ဏ ခ ဏ ပွနျ ဖွဈ နေ တတျ ပါ တယျ ။
မွနျ မာ လို ပွော ရ လငျြ ဘီ လူး စီးတယျ လို့ ဆို ရ မှာ ဖွဈ ပွီး ၊ သာ မနျ လူ မှာ ဆို ရငျ တဈ သကျ မှာ တဈ ခါ လောကျ ပဲ ကွုံ တှေ့ နိုငျ ပေ မယျ့ အိပျ စကျ ခွငျး နှငျ့ သကျ ဆိုငျ သော ရော ဂါ ရှိ သူ တှေ မှာ ဆို လငျြ ခ ဏ ခ ဏ ဖွဈ နိုငျ ပါ တယျ.. ။ တဈ ည တညျး မှာ ပဲ နှဈ ခါ သုံး ခါ ပွနျ ဖွဈ နိုငျ ခြေ ရှိ ပါ တယျနျော…။
ဘီ လူး စီး တာ ဘာ ဖွဈ လို့ ဖွဈ ရ တာ လဲ ဆို တာ ကို ဖွေ ရှငျး ဖို့ က တော့ အ တျော လကျ ဝငျ တဲ့ ကိ စ်စ ရပျ တဈ ခု လို့ ဆို ရ မှာ ပါ ပဲ…. ။ ဒါ ပေ မယျ့ လညျး ဘာ ကွောငျ့ လညျး ဆို တဲ့ အ ဖွေ အ တိ အ ကြ တော့ မ ရှိ ဘဲ သီ အို ရီ သ ဘော တ ရား အ ရ ပဲ ရှိ ပါ သေး တယျ…. ။ အ ဓိ က က တော့ လေ ဝငျ လေ ထှကျ မ ကောငျး တာ မြိုး ၊ ကာ ဘှနျ ဒိုငျ အောကျ ဆိုကျ ဒျ အ ရမျး မြား နေ တဲ့ အ ခနျး ထဲ မှာ အိပျ တာ မြိုး ဆို ရငျ ပို ဖွဈ ဖို့ လှယျ ကူ ပါ တယျ… ။
ဘီလူးစီးတာ ဘာဖွဈလို့ဖွဈရတာလဲဆိုတာကို ဖွရှေငျးဖို့ကတော့ အတျောလကျဝငျတဲ့ ကိစ်စရပျတဈခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ….။
ဒါပမေယျ့လညျး ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတဲ့ အဖွအေတိအကတြော့မရှိဘဲ သီအိုရီသဘောတရားအရပဲရှိပါသေးတယျ….။ အဓိကကတော့ လဝေငျလထှေကျမကောငျးတာမြိုး၊ ကာဘှနျဒိုငျအောကျဆိုကျဒျ အရမျးမြားနတေဲ့အခနျးထဲမှာအိပျတာမြိုးဆိုရငျ ပိုဖွဈဖို့လှယျကူပါတယျ…။ ဘီလူးစီးခွငျး “Sleep paralysis” က အသကျအန်တရာယျဖွဈလောကျအောငျ ဒုက်ခမပေးနိုငျပမေယျ့ ခံစားခဲ့ရတဲ့သူအတှကျတော့ တဈသကျတာမမနေို့ငျအောငျ ကွောကျမကျဖှယျကောငျးလှနျးပါတယျ…။
ဘီလူးစီးတာဟာ အိပျမပြျောတဲ့သူတှေ၊ အိပျခြိနျမမှနျတဲ့သူတှေ၊ ပကျလကျအိပျတတျသူတှေ၊ ဖိအားမြားလှနျးတဲ့သူတှေ၊ အရမျးကိုပငျပနျးနှမျးနယျနတေဲ့သူတှေ၊ ဆေးသုံးတဲ့သူတှမှော ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီနရောမှာတော့ ရှေးခတျေ လူကွီးတှေ ပကျလကျမအိပျနဲ့လို့ ပွောခဲ့တာက အခုသိပ်ပံနညျးကြ ရှငျးတဲ့အခါမှာလညျး အငျမတနျမှနျနတောကို သှားတှရေ့မှာပါ..။
ပကျလကျအိပျတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျအနအေထားကွောငျ့ လြှာ ဒါမှမဟုတျ အာခေါငျပြော့တို့ရဲ့ဖိအားကွောငျ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးပိတျပွီး လသေိပျမဝငျတော့တဲ့အခါ ဘီလူးစီးတာဖွဈပျေါလာနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပုံမှနျအိပျတာ၊ လဝေငျလထှေကျကောငျးအောငျလုပျရမှာဖွဈပွီး…၊ အိပျရာ ကုတငျသနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးနဲ့ လူလညျး သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးအိပျမယျဆိုရငျ “Sleep Paralysis” ချေါ ဘီလူးစီးခွငျးကိုကာကှယျနိုငျမှာပါ….။
ရွှေပေါက်ကံ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုမှ နစ်နာသူကလေးလေး ဘဝသစ်ပြန်စနိုင်ဖို့ သွားရောက်ကူညီ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ လင်းလင်း
This Month : 24879
This Year : 165199
Total Users : 191084
Total views : 577332